Marka la isticmaalayo iPhone ah, waxaa laga yaabaa in mararka meesha telefoonka noqdo cid hawlaha qaarkood. Qaar ka mid ah wax badan oo ka mid ah caadi halkan hadlay.
Kiiska 01 : iPhone Aan ka jawaabaya taabanina
Waxaa jiri kara wax ka badan hal sabab ah oo dhaqanka ah ee aad iPhone sida:
• Dabool Case ama gargaaraha Screen ah iPhone waa wasakh / burburay.
• touchscreen ee iPhone waa wasakh.
• app nidaamka Qaar ka mid ah ee telefoonka ayaa ku burburtay laga yaabaa iyo dhawraa telefoonka ka jawaabaya marka la taabto.
Si loo xaliyo arrintan, waxaad isku dayi kartaa talaabooyinka soo socda:
Ka saar wax kasta Cover Case ama gargaaraha Screen in aad iPhone uu leeyahay (haddii ay jirto).
Ka dib markii ay ka saareen, isku day in aadan taaban shaashadda oo bal eega hadday waxa ay jawaab.
Haddii ay jirto jawaab lahayn, nadiif ah shaashadda aad iPhone leh oo jilicsan, marada-free, maro wax yar qoyan.
Haddii ay dhibaatada sii socoto, isku day in ciidamada rebooting telefoonka hoos ugu riixaya oo haysta button Home iyo hurdada / button Wake isku mar.
Ka dib markii la xirey kadibna telefoonka, ka eeg haddii aad la xidhiidhi karto, qalabka via taabto.
Xaaladdan oo dhan hababka kor ku guul daraystaan, waa in aad la xiriirto adeegga Apple xarunta kuugu dhow ee la oggol yahay ama Apple Tafaariiqda Store isla markiiba.
Kiiska 02 : iPhone Aan ka jawaabaya xeedho
Mid ka mid ah sababaha ugu weyn ee iPhone noqday cid xeedho ku ah in ay jirto marada wanaagsan lacagta la soo ururiyay gudahood dekedda xeedho kaas oo looga hortago xiriir adag oo u dhexeeya pin xeedho iyo godka.
Si aad u nadiifiso godka, waxaad isticmaali kartaa clip warqad ama maankiisa suulka. Waxaad kaloo isticmaali kartaa hawada Tifaftirayaasha nadiifinta godka in ay gabi ahaanba meesha laga saaro dhammaan marada / ciidda ka dekedda ka dib.
Haddii dhibaatadu sii socoto xitaa nadiifinta dekedda amraya ka dib, waa in aad qaadato iPhone in Apple Service Center ee kuugu dhow idman ama Apple Tafaariiqda Shop.
Kiiska 03 : iPhone Aan ka jawaabaya Computer
Qaar ka mid ah sababaha ugu badan ee aad computer sii ka jawaabaya aad iPhone ku xiran in ay kala yihiin:
• Nidaamka rakibay hawlgalka kombiyuutarka (Windows ama Mac) ma laga yaabaa in ay updates ugu dambeeyey.
• Waxaa laga yaabaa inaad duug ah (u badan tahay Huriye) version of Lugood lagu rakibay on your computer.
• account ayaa user loo isticmaalaa in lagu gal computer, halka xira iPhone waxaa laga yaabaa khaldan / leeyihiin files musuqmaasuq.
• aad computer laga yaabaa in virus-qaba cudurka.
• cable ayaa USB xogta in aad isticmaasho in ay ku xidhmaan aad iPhone in computer waxaa laga yaabaa khaldan.
Waxaad isku dayi kartaa habka soo socda si uu u xaliyo arrinta:
Isku day xira iPhone in computer ka duwan oo loo arko haddii computer waa ay awoodaan in ay ogaan telefoonka.
Haddii computer ka duwan u arki karaan iPhone, ee hore computer, download iyo rakibi ugu dambeeyay updates nidaamka qalliinka on your computer. (Waxaad ka eegi kartaa, waayo, updates laga heli karaa website nidaamka qalliinka ee rasmiga ah.)
Haddii rakibidda updates ugu dambeeyey, waayo, nidaamka qalliinka kombiyuutarka ma xalliyo arrinta, download iyo rakibi nooca ugu dambeeya ee Lugood for your computer.
Haddii dhibaatadu ay weli, sameysato akoon cusub user on your computer, gal account cusub, xiriiriyaan iPhone in computer oo la arko haddii computer helo telefoonka.
Xaaladdan oo kale xaalada ayaa ah mid aan weli la xalin, isku day in aad dhowr computer ee fayraska.
Haddii arrinta weli, waxaad isku dayi kartaa adigoo isticmaalaya USB cable ka duwan in ay ku xidhmaan aad iPhone si aad u computer.
Kiiska 04 : iPhone Aan ka jawaabaya Lugood
Your iPhone dhici karta in uu ka jawaabo Lugood markii xiran computer sababta oo ah:
• Lugood ayaa (kac ahayn) qaybiyay in aan si auto-u hagaagsan iPhone la maktabadda Lugood marka xiran.
• Waxaad u adeegsadaan version weyn ee Lugood.
• Maktabadda Lugood jira la khilaafo laga yaabaa.
Si loo xaliyo arrimaha, waxaad isku dayi kartaa fursadaha soo socda:
Barkinta iPhone ka kombiyuutarka.
Burcad Lugood on your computer.
Tag Edit > rabtid (on Windows) ama Lugood > rabtid (on Mac).
Hubi hortag iPhone / iPod-ka syncing si toos ah checkbox.
Save isbedel iyo isku day xira iPhone in kombiyuutarka.
Haddii xal kor ku guuldareysto, waxaad isku dayi kartaa degsado iyo ku rakibidda version ugu dambeeyey ee Lugood for your computer.
Haddii arrinta ay weli sii socoto, waxaad samayn kartaa maktabada cusub Lugood adigoo raacaya habka hoos ku siiyo:
A. ka kombiyuutarka Barkinta aad iPhone.
B. Haddii la isticmaalayo ah Windows computer, jaraa'id iyo hay hoos Shift muhiim ah oo ku saabsan keyboard ah.
C. Ilaalinta ee Shift fure u riixriixan, Lugood bandhigista on your computer.
Fiiro Gaar ah: Wixii computer Mac, abuurtaan Lugood oo markiiba wax miiran iyo rugtii Xulashada button on keyboard ah.
D. Laga soo Dooro Lugood Library sanduuq oo u muuqata, riix Abuur Library button iyo raac tilmaamaha ku-shaashadda si ay u dhammaystiraan geedi socodka Lugood Abuurka maktabadda.
E. Marka sameeyo, raac tallaabooyinka kor ku xusan laga bilaabo A inay D iyo markii saabsan Dooro Lugood Library sanduuqa, riix Dooro Library button waqtigan.
F. Raac tilmaamaha ku-shaashadda si ay u doortaan maktabadda Lugood cusub ee la abuuray.
G. Close iyo furto Lugood.
H. Connect aad iPhone in computer oo la arko haddii arrinta la xaliyey.
Kiiska 05 : iPhone Aan ka jawaabaya Home Button
Your iPhone noqon karaan cid button Home sababtoo ah:
• Waxaa jira qaar ka mid ah app dhibaan.
• Waxaa jira qaar ka mid ah boodhka soo ururay hoose ee badhanka la hayo button ka xidhiidhka la wareegga.
• button shirka Home ayaa laga yaabaa in ay sabab u helay misaligned cadaadis joogto ah dibadda.
• button Home The ama ay cable gudaha waxaa laga yaabaa khaldan.
Iyadoo ku xiran sababta aad iPhone noqday cid button Home ah, waxaa laga yaabaa in xal oo kala duwan:
Qaar ka mid ah app dhibaan, aad iiraacshay kartaa telefoonka adigoo raacaya taallaabooyinka hoos ku qoran:
A. Open stock (dhisay-in) app kasta oo sida la dhisay-in calculator, saacad, iwm
B. Ka dib app la furay, jaraa'id iyo hay badhanka hurdada / Wake ilaa ay Slide in tamarta off fariin u muuqataa shaashadda bandhigay.
C. Slide fartaada shaashadda in tamarta off telefoonka.
D. Sug 10 ilbiriqsi ka dibna la bilaabi aad iPhone.
E. Iska hubi haddii arrinta la xaliyey.
Haddii boodhka qaar ka mid ah waxaa lagu hayo button Home ka xidhiidhka la wareegga:
A. Qaado qaar ka mid ah 98-99 Boqolkiiba Isopropyl Alcohol ka dukaan wax hardware.
B. aad iPhone in uu leeyahay badhanka Home khaldan Power off.
C. codso dhawr (u badan tahay in 2-3) dhibcood oo Isopropyl Plcohol si toos ah button Home isticmaalaya ah eyedropper, suuf, iwm (taxadir dheeraad ah oo aadan MA hoos u khamriga ee shaashadda.)
D. Marka sameeyo, wax yar oo si joogta ah ka jaftaa button Home qaar ka mid ah shay jilicsan sida dambe ee a qalin, qalin, ama xataa fartaada.
E. sug 50 ilaa 60 daqiiqadood in ay oggolaadaan in shirka button Home iyo circuit si ay u qalalaan.
F. Guuleysatey telefoonka iyo u aragto haddii arrinta la xaliyey.
Wixii button Home shirkii oo misaligned:
A. Power aad iPhone.
B. Connect cable awooda in geeyey oo ay la socdaan taleefanka si aad iPhone ee dekedda ku amraya ah.
C. Mari qadar yar oo ah xoog ku haysta ku qodobtay oo ku hardiyi ee geliyo biinanka ku amraya intii ka sii weyn.
D. Marka aad dareento in shirka ayaa dib-u-safan in ay meel (Tan ayaad ku ogaan doontaa dhaqdhaqaaqa shirka in farahaaga dareemi doono inta ay socoto), ka soo baxdo cable amraya ah.
E. Guuleysatey aad iPhone oo bal eega hadday button Home waxa uu noqday ka jawaabaan.
Wixii button Home khaldan ama ay cable khaldan:
A. Haddii aad doonayso, waxaad bedeli kartaa qayb ka mid ah oo khaldan oo ay adiga kuu gaar ah.
B. kale, talinayaa, in kale waa in la soo booqdo Apple ah ee kuugu dhow Idman Center Service iyo aad u hesho waxa ay cudurka iyo bedelay farsamayaqaan shaqada xirfadlayaasha iyo idman.
Kiiska 06 : iPhone Aan ka jawaabaya weerar dadban
Haddii aad iPhone ku guuldareysto in ay ka jawaabaan mari, sababaha ay suurto gal noqon kara:
• iPhone ayaa qarka u saaran inuu Caawinta Touch .
• Waxaa jira qaar ka mid ah arrinta la macruufka ah.
Waxaad ka qaban karta dhibaatada adigoo raacaya tilmaamaha sida hoos ku qoran:
In fiican u kala furmay, riix badhanka Home ee seddex jeer oo isku xigta. (Waxa uu furi doonaa iPhone.)
Raac tallaabooyinka ku haboon si ay u helaan oo u beddeli Caawinta Touch goobaha aad iPhone.
Fiiro Gaar ah: Iyada oo ku xidhan model ah oo aad telefoon iyo version ee macruufka rakibay waxaa ku korkiisa, geeddi-socodka lagu beddelo Caawinta Touch goobaha kala duwanaan karaan. Waxaa laga yaabaa inaad u baahan tahay inaad hubiso Buugga User ee aad iPhone si aad u hesho habka saxda ah.
Xaaladdan oo macruufka ah waa khaldan iyo xal kor ku yaal aanu hoos u shaqeeyaan, saxaafadda iyo isku haya Guriga iyo hurdada / Wake button.
Sida ugu dhakhsaha badan aad ku arki logo Apple ah, sii daayo badhamada iyo sug ilaa iPhone reboots.
Fiiro Gaar ah: Tani ma masixi xogta aad ka iPhone.
Ka bilaw iPhone la qaabeynta cusub.
Kiiska 07 : iPhone Aan Wax ka qabashada soo celinta
Waxaa jiri kara sababo dhawr ah oo laga yaabo in lagu hayo aad iPhone ka soo celinta:
• nidaamka qalliinka ayaa lagu rakibay on your computer (kaas oo iPhone ku xiran tahay) ma laha updates ugu dambeeyey.
• software ammaanka (tus antivirus, brannmur, iwm) ayaa si adag loo qaybiyay si ay u sugaan amaanka sare.
• Waxaa jira cillad USB ah.
Sida loo dayactir Waxaa
Hubi in nidaamka qalliinka lagu rakibay on your computer waa kor-u-taariikhda. Haddii loo baahdo, download updates ah, iyaga rakibi, ka dibna isku day in aad dib u soo celinta iPhone.
Haddii xal kor ku yaal aanu shaqayn, si ku meel gaar gab ama uninstall codsiga ammaanka kasta oo lagu rakibay on your computer ka dibna isku day in aad dib u soo celinta aad iPhone.
Haddii iPhone weli waa kaliftay in la soo celiyo, barkinta dhammaan qalabka USB ka computer ka tagay oo kaliya iPhone ku xiran waa in ay, ka dibna loo soo celiyo aad iPhone.
Haddii dhammaan xalka kor ku guul darreysato in ay soo celiso aad iPhone, miciinka u dambeeya, aad iftiimiyo karo saamiyada macruufka dib si aad u iPhone.
Fiiro Gaar ah: Tani masixi doono xogta oo dhan ka iPhone, ka dhigeysa in qalab cusub.
Kiiska 08 : iPhone Aan ka jawaabaya Screen Black
Sababaha suuragal ah iPhone aan ka jawaabaya shaashadda madow waxay noqon kartaa:
• macruufka ee iPhone ayaa ku burburtay iyo waxa la hayo telefoonka xataa howleheedii.
• shirka bandhigay waa khaldan oo u baahan in la bedelo.
Si aad u hagaajin arrintan, waxaad:
Press iyo qaban Guriga iyo hurdada / Wake button isku mar 10-15 ilbiriqsi.
Ka dib markii logo Apple u muuqataa shaashadda, isticmaal hab ku haboon oo lagu bilaabi aad telefoon iyo bilaaban waxaa sida caadiga ah la isticmaalayo.
Haddii logo Apple uusan ka muuqan ka dib markii cadaadinaya oo haysta badhannada sida kor lagu sharaxay, screen bandhigay waxaa laga yaabaa khaldan oo u baahan in la bedelo.
Link hoose wuxuu muujinayaa tilmaamaha tallaabo-tallaabo muuqaal ah si ay ugu bedesho shirka bandhigay.
Link: https://www.ifixit.com/Guide/iPhone+4+Display+Assembly+Replacement/11755?revisionid=HEAD .
Kiisaska ku xusan yihiin inta badan la kulmaan dadka isticmaala iPhone. Haddii ay dhacdo in aad iPhone ayaa dhibaato kala duwan, sida ugu wanaagsan oo ugu ammaanka badan ee lagu xallinayo arrintan uu noqon doono si loo hubiyo iyadoo forum taageerada rasmiga ah ee Apple ayaa, ama u qaataan in ay Apple Service Center ee kuugu dhow ama Idman Apple Tafaariiqda Store.
> Resource > iPhone > iPhone Aan ka jawaabaya: Siyaabaha dayactir Waxaa